အကောင်းဆုံးစက်ဘီးအဝတ်အစားတွေကဘာတွေလဲ။ - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > စက်ဘီးဂျာစီ - ပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
စက်ဘီးဂျာစီ - ပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
Rapha Pro အဖွဲ့ဂျာစီ။
Endura D2Z Aeroဂျာစီ။
Cycliste Micheline ကဖေးဂျာစီ။
Castelli တောင်တက်သမား၏ 3.0ဂျာစီ။ ဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက်။
Santini Mito Spiloဂျာစီ။ ဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက်။
ဂိုး C7 လူမျိုးဂျာစီ။ ဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက်။
အကယ်၍ သင်သည်စက်ဘီးစီးရန်အသစ်အဆန်းဖြစ်လျှင်စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီဝတ်ထားသည့်အခြားမြင်းစီးသူရဲများနှင့်၎င်းတို့သည်လေးနက်သောမြင်းစီးသူရဲအတွက်သို့မဟုတ်သင်သိကျွမ်းလိုသောပညာရှင်ကိုသာသိလိုခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ တစ်ခုကပိုက်ဆံလား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းထင်တာလား။ ငါကြည့်ရတာသူတို့ကြည့်ရတာသဘောကျတာကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ gcn မှာစက်ဘီးစီးတာကမင်းစီးနင်းဖို့အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘောင်းဘောင်းဘီတိုတွေသာဒုတိယပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းများအားလုံးကိုရှင်းပြ။ အဖြေပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အမြန်နှုန်း၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ထိရောက်မှုစသည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်သင်အမှန်တကယ်အဘယ်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ စက်ဘီးစီးပါကအချို့ကိုလည်းကြည့်ပါလိမ့်မည်။ gcn အက်ပလီကေးရှင်းကို ၀ ယ်သောအခါသင်စက်ဘီးစီးနေစဉ်စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီကို ၀ တ်သင့်သည်၊ ၎င်း၏ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ စက်ဘီးကိုစီးကြစို့၊ အကယ်၍ မင်းကစီးချင်တဲ့သူ၊ မင်းရဲ့ pbsor ကိုဖျက်စီးရမယ်၊ မင်းပျော်စရာပဲလိုချင်လား၊ မင်းစီးနင်းစီးရတာသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အိတ်တွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရှောင်ပါ။ အခုစက်ဘီးစီးတာကလေခွင်းထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ တီရှပ်သို့မဟုတ်ထိပ်ပိုင်းသည်သင်၏အသားအရေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောကြောင့်လေနှင့်လေထဲတွင်လေထဲတွင်ပျံ့လွင့်နေသောလှုပ်ခတ်နေသောခြံအားလုံးသည်သင်၏မောင်းနှင်မှုကို ပို၍ ပင်ခက်ခဲစေသဖြင့်အသားအရေကိုဆွဲထုတ်စရာမလိုပါ။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားပါ၊ သို့သော်အိတ်နည်းနည်း၊ ဆွဲအားနည်းလေလေ၊ သင်၏ကြံ့ခိုင်မှုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ အသားအရေတင်းကျပ်စွာ ၀ တ်ဆင်ရန်လေ့ကျင့်နေမည်လားဆိုတာသတိရပါ၊
သင်စီးနင်းရသည့်အကြောင်းရင်းမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေသင်လေစီးနိုင်မှုနှင့်လေခွင်းဒိုင်းနမစ်များပါသောစက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်သည့်အခါခြားနားချက်ကိုသင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စီးနင်းနိုင်သည့်အခါစီးနင်းနိုင်သည့်နေရာကိုစီး။ သွားပါကပခုံးနှင့်အင်္ကျီများပေါ်တွင်ပိုမိုကျယ်ဝန်းသည်။ အဆိုပါလက်ကိုင်သို့ရှေ့သို့နှင့် Dropsit စီးနင်းအနေအထား၌သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ သင်ထသောအခါသင်စီးနင်းသည့်နေရာအတွက်အများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားသည်။ သင်၏ဂျာစီသည်ရှေ့တွင်အလွန်တိုတောင်းနိုင်သည်။ နောက်ကျောကလည်းနောက်ကျလွန်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်စီးနင်းနေသည့်အနေအထားသို့ရောက်နေပါကသင်၏ဂျာစီသည်အလွန်တင်းကျပ်စွာကိုက်ညီသောကြောင့်မသင့်တော်ဟုသင်မခံစားရပါ။ သို့မဟုတ်သေးငယ်လွန်းခြင်းတို့သည်မတ်တပ်ရပ်သည့်အခါသင်စီးနင်းသောအနေအထားတွင်သင်စမ်းချင်သောဂျာစီကိုကြိုးစားသည့်အခါစတိုးဆိုင်သို့သွားပြီးစက်ဘီးစီးမည်ကိုကြည့်ရန်ဤအရာသည်သင်ဂျင်စီ၏မျက်နှာပြင်ကိုလောင်စေလိုခြင်းကိုမရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အပိုခရီးဆောင်အိတ်များမပါရှိလျှင်သင်ဤစီးနင်းအနေအထားရောက်နေပါကအိတ်ကပ်နှင့်အတူပါကစက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီသည်လည်းကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီသည်နောက်ကျောတွင်အိတ်ကပ်သုံးခုရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သင်၏စက်ဘီးစီးနေစဉ်သင်၏သေးငယ်သောအရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကသင့်အနေဖြင့်သင်၏နောက်ကျောဘက်တွင်အိတ်များ၊ ကျောပိုးအိတ်များသယ်ဆောင်စရာမလိုဘဲတင်ပါးဆုံရိုးအိတ်ကပ်များကိုဘောင်းဘီတိုများဖြင့်မဖြည့်ဘဲမထားဘဲသင်၏နောက်ကျောဘက်တွင်ရှိနေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ သင်၏ခြေနင်းစတိုင်၏လမ်းစဉ်ကိုသင်ရိုက်လိုသောအခါသူတို့သည်အလွန်အသုံးဝင်သည် ကိရိယာတစ်ခု၊ ပန့်တစ်ခုသို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းကိုသင်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အရာများရှိသည်။ သို့သော်သင်၏အကောင်းဆုံးအရာသည်သင်ဘာကိုသိသည်ကိုသင်သိသောအိတ်သုံးမျိုးဖြင့်အမှန်တကယ်အဆင်ပြေသည့်နေရာ၌သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စုစည်းနိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အစာစားဖို့သွားနေရင်းအိတ်တွေအတွက်ငါအကြိုက်ဆုံးအကြောင်းပြချက်ကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ အိတ်ဆောင်သုံးလုံးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တာနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အရွယ်အစားစုံတွဲတွေထွက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့အားလုံးအတွက်ဇစ်ပါ ၀ င်နိုင်မယ့်ဂျာစီအင်္ကျီတွေလည်းရတယ်။ မိုးရွာနေသည့်ဆောင်းရာသီစီးရီးများအတွင်းသင်၏ဖုန်းနှင့်အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုလုံခြုံစေမည့်ဆောင်းရာသီဂျာစီများ၌ရေစိုခံ။ အိတ်ကပ်များကိုလည်းမောင်းနှင်နိုင်အောင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
သင်ခရီးသည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင့်အား ပို၍ မြင်နိုင်စေရန်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသောအိတ်ကပ်များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အလင်းရောင် နည်း၍ သို့မဟုတ်အလုပ်ရှုပ်နေသောလမ်းများပေါ်တွင်သင်ရောက်နေလျှင်လမ်းလျှောက်သူများနှင့်အခြားလမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောကြောင့်မျက်စိအရှိဆုံးဂျာစီကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီ ၀ ယ်သည့်အခါပိုမိုပေါ့ပါးသောအရောင်များ၊ တောက်ပသောဒီဇိုင်းများသို့မဟုတ်ရောင်ပြန်အသေးစိတ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်အလုပ်များသောလမ်းများပေါ်တွင်သင်တက်နေစဉ်။
စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီသည်စီးနင်းနေစဉ်အဆင်မပြေမှုနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှုကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏စက်ဘီးစီးနေသောအင်္ကျီလက်များမကျစေခြင်းသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီချော်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်သေချာသည်ကိုသင်စက်ဘီးဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သင်ထွက်ခွာသွားတော့မည်ဆိုပါကစက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ယင်းကိုသတိရပါ။ သင့်ကိုယ်သင်မြင်နိုင်ရန်နှင့်အဆင်ပြေစေမည့်အပြင်သင်နှင့်အခြားလမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေပါလိမ့်မည်။ သင်ကော်ဖီဆိုင်သို့သွားစဉ်သို့မဟုတ်စက်ဘီးမှအပအခြားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေစဉ်လမ်းလျှောက်ရန်။ သို့သော်သင်ကကြိုးစားလေ့ကျင့်နေလျှင်သို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုပါက ပို၍ တင်းကျပ်သောဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်သည် - လေခွင်းအားနည်းချက်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်ရှိပြီး၎င်းလေခွင်းအားသာချက်များသည်သင်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ရှည်သောလက်ရှည်ဂျာစီသို့မဟုတ်လက်တိုတိုဂျာစီကိုစီး။ သွားနိုင်သည်။ လက်တိုဂျာစီသည်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကအေးသောရာသီဥတုတွင်သင်လက်မောင်းပူနွေးသောသူများနှင့် ၀ တ်နိုင်ပြီးသင်လက်မောင်းကိုအလွယ်တကူယူနိုင်သည်ဆိုလျှင် သင်ကဂျာစီအောက်မှာအခြေစိုက်စခန်းအမျိုးမျိုးကို ၀ တ်ဆင်နိုင်တယ်။ လက်တွေ့မှာဇစ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကပူနွေးလာရင်မြန်မြန်ဖွင့်နိုင်မယ်၊ လန်းဆန်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ အခုဆိုရင်အအေးအတွက်ပိုသင့်တော်တဲ့ပိုရှည်အင်္ကျီတွေရှိတယ်။ ရာသီဥတုသည်အပြင်ဘက်တွင်အေးသောရာသီဥတုကိုထိန်းထားနိုင်သော်လည်းအစိုဓာတ်ကိုချွေးများအိတ်ကြီးတစ်ခုမှမလွတ်မြောက်စေနိုင်dd အောက်တွင်ရှည်လျားသောလက်ရှည်ဂျာစီဂျာစီများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြစ်ကြသည်။ လေနှင့်ရေဒဏ်ခံနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်ရှူရှိုက်နိုင်သောကြောင့်ချွေးများထွက်လာပြီးသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အစိုဓာတ်မှလွတ်မြောက်ရန်အပူမရှိပါ။
သင်နေသာသောအခြေအနေများတွင်ကားမောင်းနေလျှင်သင့်တွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သင့်မှုမြင့်မားသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုကိုစဉ်းစားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်နေလောင်ခြင်းမခံရစေရန်သတိပြုပါ။ နောက်ကျောကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင်၏ဂျာစီသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်အကြိမ်ကြိမ်ဖမ်းမိသောခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုရှိသည်။ ငါသည်ငါ့နောက်ကျောအပေါ်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးမဝတ်ခဲ့ပါနှင့်နေရောင်ငါ့ကိုငါ့ဂျာစီမှတဆင့်နှင့်ငါ့အရေကိုပေါ်ငါ့ကိုတကယ်မီးရှို့ရာဒါကြောင့်သင်ကရှောင်ရှားလိုလျှင် h အကယ်။ သင်စီးနင်းတိုင်းမတိုင်မီသင်၏နောက်ကျောအပေါ်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးထားချင်လျှင်, ခရမ်းလွန်နှင့်အတူဂျာစီကိုရယူပါ သင့်ရဲ့ကျောဘက်မှာအကာအကွယ်။ ကျုပ်တို့ပြောနေတာကသူတို့အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဂျာစီမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုမင်းသာရှိရင်မင်းသာမန်အဝတ်အစားထက်စက်ဘီးစီးတာပိုများနေတယ်။ စက်ဘီးစီးတာကသာမန်စီးနင်းသူတစ်ယောက်ဆီကနေစက်ဘီးစီးတာကိုသွားတဲ့အခါသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်ပြီးစက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီ ၀ ယ်သောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်ကဏ္aspectsများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရပ်တွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကိုသင်သိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကာတီလီလေ့ကျင့်ရေးဂျာစီများကိုယခုတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ gcn shop, ဒါကြောင့်ငါစွန့်ခွာခြင်းမပြုမီငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များအပိုင်း၌ငါ့ကိုသိပါစေ, သင်တစ် ဦး စက်ဘီးစီးဂျာစီကိုဝတ်ဆင်နှင့်စက်ဘီးစီးဂျာစီဝယ်ယူတဲ့အခါသင်ဘာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသလဲ? မင်းတို့အားလုံးဆီကဒီအကြောင်းအခုငါကြားချင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါဒီမှာရှိရင်ငါ့မှာအစားအစာရှိပေမယ့်စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ငါချက်ချင်းသွားတာပေါ့
သင်အသစ်ရောက်ရှိနေလျှင်စက်ဘီးစီးခြင်းသင်တွေ့လိမ့်မယ်စက်ဘီးဂျာစီလုပ်ပါပုံမှန်အ ၀ တ်အစားများထက်ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်ရှိသည်သင်၏နောက်ကျောကိုဖုံးအုပ်ထားရန်နှင့်ထိုအချက်ကိုချိန်ညှိရန်အတွက်နောက်ကျောကိုပိုရှည်စေပါစက်ဘီးစီးကွေးကျော်စီး။
သင်ပုံမှန်အရွယ်အစားကိုစမ်းကြည့်ပါရွေးချယ်ပါ, ထိုသို့ပုံစံလျောက်ပတ်ဖြစ်သင့်သည်။ရှပ်အင်္ကျီများအထူးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏စက်ဘီးစီးခြင်းများသောအားဖြင့်အမြီးတစ်ချောင်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနောက်ကျောသည်ရှေ့ထက်ရှည်သည်။ သေချာအောင်လုပ်ပါဂျာစီရှည်လျားပြီးရှည်လျားပြီးသင့်လက်ကိုစံအဖြစ်မြှင့်သည့်အခါမဝေးလွန်းပါစက်ဘီးစီးခြင်းရာထူး။
လေခွင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်စက်ဘီးစီး။ လေပြေထဲမှလှန်လှောထည်များက၎င်းတို့ကိုနှေးစေသည်စက်ဘီးစီးယေဘုယျအားဖြင့်နှေးကွေးခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင်တင်းကျပ်စွာဂျာစီမှစူပါအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်ဝတ်ဆင်။၇ ဇန်နဝါရီ 2021
စက်ဘီးအဝတ်အစားတင်းကျပ်စွာ fit သငျ့သလော
မင်းရဲ့စက်ဘီးစီးဂျာစီ fit သင့်ပါတယ်cuffs နှင့်အတူ snuglyလျောက်ပတ်chafing ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်သင့်လက်မောင်းထဲမ ၀ င်စေရန်လည်းနီးကပ်စွာစဉ်းစားပါတင်းကျပ်တီရှပ်ထက်, ဒါပေမယ့်လျော့နည်းတင်းကျပ်စွာတစ် ဦး အခြေစိုက်စခန်းအလွှာထက်။
TO သို့စက်ဘီးစီးဂျာစီကနေတကယ်ကောင်းမွန်စွာရှူရှိုက်နိုင်သည့်အထည်သည်သင်မည်မျှကြာကြာမောင်းနေစေကာမူရာသီဥတုမည်မျှပူသည်ဖြစ်စေသင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်စက်ဘီးစီးဂျာစီရာသီဥတုပူနွေးလာသည့်အခါသို့မဟုတ်အေးသွားသည့်အခါစက်ဘီးစီးသူမ၏အဝတ်အစား၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။မတ် ၂၆ 2018
အဆိုပါလေ့လာမှုများပြသအားလုံး Aero- ဝတ်ဆင်သောအခါ, လေခွင်းဆွဲလျှော့ချကြောင်းအားလုံးအမြန်နှုန်း။စက်ဘီးအဝတ်အစားအဓိပ္ပာယ်မင်းသွားမယ်မြန်မြန်ဒီတော့အဖြေကဟုတ်တယ် ဒါသံသရာ-specific aero-အဝတ်အစားအခြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းပေးသည်။ Form-fitting - ခက်ခဲသောခြေဖြင့်နင်းစဉ်အတွင်းပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်လေခွင်းအားနည်းခြင်းမရှိ။ဇွန် ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
မင်းရဲ့စက်ဘီးစီးခြင်းဂျာစီသင့်တယ်လက်ဖျားခါခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန်အတွက်လုံလောက်သောအနီးကပ်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်းသင်၏လက်မောင်းသို့မတည့်ပါစေနှင့်တင်းကျပ်တီရှပ်ထက်, ဒါပေမယ့်လျော့နည်းတင်းကျပ်စွာတစ် ဦး အခြေစိုက်စခန်းအလွှာထက်။
TO သို့စက်ဘီးစီးဂျာစီတကယ်ကောင်းသောအသက်ရှူနိုင်သောထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းသည်မည်မျှကြာကြာမောင်းနှင်သည်ဖြစ်စေရာသီဥတုမည်မျှပူစေကာမူခြောက်သွေ့အေးမြစေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာအကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်စက်ဘီးစီးဂျာစီမဆို၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စက်ဘီးစီးသည်ရာသီဥတုပူနွေးလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဗီရိုကိုအအေးခံပါ။မတ် ၂၆ 2018
ကြာရှည်-လက်ဂျာစီများသည်အေးသောအခြေအနေများတွင်အပိုနွေးပါလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည် windproof panel သို့မဟုတ်ရေဒဏ်ခံနိုင်သည့်ထပ်ကာထပ်ကာထပ်ကာထပ်ကာကာကွယ်လိမ့်မည်။မေလ ၃ ရက်၊
ဂျာစီများသောအားဖြင့်သုံးခုရှိသည်အိတ်ကပ်နောက်ဘက် ဤသည်သည်စုပ်စက်၊ ID၊ မုန်၊ မြေပုံ၊ ဂျာကင်၊ ကင်မရာနှင့်ကိရိယာများသိုလှောင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ဇွန် ၂၁ 2008 r ။
အမျိုးသား၏စက်ဘီးအ ၀ တ်အထည်များသည်ခန္ဓာဗေဒ၊ ပူနွေးသောအပူရှိန်အတွက်ပေါ့ပါးသောနွေရာသီစက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်းရာသီတွင်အေးခဲနေသောဆောင်းရာသီအတွက်ပူနွေးသောစက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ProBikeKit USA ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားစီးစက်ဘီးအ ၀ တ်အစားများကို ၀ ယ်ပါ။ Wishlists ကိုအသုံးပြုရန်ဝင်ပါ / မှတ်ပုံတင်ပါ။
လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ဂျာစီများသည်လေခွင်းအားနည်းခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်းနည်းပညာကိုအဓိကထားသည်။ အင်္ဂါရပ်များကြွယ်ဝသည့်အပန်းဖြေစရာရွေးချယ်စရာများအတွက်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီလိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ရွေးလိုက်သည် ယခုထွက်သွားကြ။ လမ်းကိုအုပ်ချုပ်ကြ။
သငျသညျစီးနင်းနေစဉ်, ဒြပ်, အသက်ရှူနိုင်သောအထည်ကနေလုပ်စက်ဘီးစီးဂျာစီ, သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအေးမြနေရန်ကူညီရန်, လေစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်။ ပူနွေးသောရာသီဥတုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပိတ်ထည်များဖြင့်စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီများကိုပေးပါသည်။
စက်ဘီးစုပ်စက် - နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
ငါစက်ဘီးစုပ်စက်ဘယ်လိုအမျိုးအစားလိုပါသလဲ စံအဆို့ရှင်နှစ်မျိုးမှာ Schrader နှင့် Presta (ဓာတ်ပုံ) တို့ဖြစ်သည်။ Schrader အဆို့ရှင်များသည်ကားတာယာများပေါ်တွင်တွေ့ရသည့်တူညီကြသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အဆို့ရှင်နှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူစက်ဘီးစီးပါကသင်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်ကိုက်ညီမည့်ကြမ်းခင်းစုပ်စက်ကိုသင်လိုချင်လိမ့်မည် (ပုံ - အောက်၊ ညာ) ။ သင်၏ frame pump သည်အဆို့ရှင်အမျိုးအစားကိုသင်စက်ဘီးစီးရန်သင်စီစဉ်ထားသောစက်ဘီးပေါ်တွင်ကိုက်ညီရမည်။
စက်ဘီးစီးနေသည့်နှလုံးခုန်နှုန်း - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးစီးသူများအဘယ်နှလုံးခုန်နှုန်းရှိသလဲ။ ပျမ်းမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအနားယူသည့်နှလုံးခုန်နှုန်းသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၆၀ မှ ၉၀ အထိဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် Tour de France စက်ဘီးစီးသူများ၏အနားယူသည့်နှုန်းကိုတိုင်းတာလျှင် ၄ င်းသည်တစ်မိနစ်လျှင်ကြိမ်နှုန်း ၄၀ နှုန်းဖြင့် ပို၍ နိမ့်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်စက်ဘီးကိုဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ သင်၏စက်ဘီးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်း (၈) ချက်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ ကွင်းဆက် Lube ။ ရှေ့ဆုံးကိုအောက်ချပါ။ သင်၏ကုန်းနှီးအမြင့်မှန်ကြောင်းသေချာပါစေ။ နင်းတင်းမာမှုကိုညှိပါ။ သင်၏တာယာဖိအားကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်၏ဂီယာများကိုသေချာစွာချိန်ညှိပါ။ သင်၏ဘရိတ်များအားကောင်းမွန်စွာချိန်ညှိထားပါ။ 2017 ။
Phillips စက်ဘီး - စာရင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
အဘယ်သူသည် Phillips ကစက်ဘီးကိုဖန်ဆင်း? Phillips Cycles Ltd. သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဘာမင်ဂမ်အနီးရှိ Smethwick တွင်အခြေစိုက်သည့်ဗြိတိသျှစက်ဘီးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သမိုင်းကို ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် Raleigh Industries ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Tube ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
တောင်ကြီးတောင်ငယ်၏ဆိုင်ကယ်ရပ်ဆိုင်းမှု - ပြည့်စုံသောရည်ညွှန်းချက်
တောင်ကြီးတောင်ငယ်အတွက်အကောင်းဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုကဘာလဲ။ လမ်းကြောင်း၊ enduro နှင့် xc တောင်တန်းများအတွက်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဆိုင်းထိန်းစနစ်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ RockShox Pike Ultimate.Fox 36 စက်ရုံ GRIP2.RockShox Lyrik Ultimate RC2.Marzocchi Bomber Z2.Cane Creek Helm Coil.DVO Beryl ။ Formula Selva R.RockShox SID Ultimate ။
သုတ်စက်ဘီး - အန္တိမလမ်းညွှန်
အသုတ်သည်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်နာမည်ကောင်းလား။ Batch Commuter သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစက်ဘီးများနှင့်ဆက်နွှယ်သောကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသော၊ ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသောစက်ဘီးကိုလိုချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
(c) 2021 cyclecopenhagen.dk. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.